रूसले निम्त्याएको विवाद - खेलकुद - साप्ताहिक
श्रावण १९, २०७३
ओलम्पिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिन्छ, डोपिङ अर्थात् प्रतिबन्धित शक्तिवद्र्धक औषधी प्रयोग गर्नु । प्रतिबन्धित शक्तिवद्र्धक औषधी प्रयोग गरेर खेलाडीले क्षमताभन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् । यस्तोमा डोपिङ गरेकाहरू प्राकृतिक शारीरिक शक्तिमै निर्भर खेलाडीमाथि हाबी हुन्छन नै, तर यो खेल भावनाको ठीक विपरीत हो । अहिले ओलम्पिक इतिहास डोपिङकै सबैभन्दा ठूलो समस्यामा अल्झिएको छ ।
यो विवाद निम्त्याएको हो, रूसले । यदि एउटा सिंगो देशले सरकारी तवरबाटै डोपिङ गर्छ भने स्थिति कस्तो होला ? स्वभाविक रूपमा त्यो भयावह हुन्छ नै । रूसले गरेको काम यही हो, सरकारी निकायकै योजनाअन्तर्गत व्यवस्थित ढंगले खेलाडीको डोपिङ । रूस यो घटनामा समातिएपछि उसलाई रियो ओलम्पिकमा सहभागी गराउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर ठूलै विवाद भयो । एक थरीले रूसमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुराको वकालत गरे ।
केहीले रूसका केही खेलाडी इमान्दार पनि छन् । यसरी देश नै प्रतिबन्धमा पर्दा ती निर्दोष खेलाडीप्रति अन्याय हुन्छ भनेर तर्क प्रस्तुत गरे । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले हालै मात्र एउटा निर्णय गर्दै रूसलाई रियो ओलम्पिकमा सहभागिताको आंशिक अवसर मात्र दिने भएको छ, अर्थात् रूस पूर्ण प्रतिबन्धबाट भने जोगिएको छ । यस्तोमा डोपिङविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएकाहरू स्वभाविक रूपमा निराश भएका छन् ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफैं अगाडि आएर डोपिङ गर्न मद्दत गर्ने सबैमाथि छानबिन र कारबाही हुने वचन दिएपछि आईओसीको यो निर्णय आएको हो । पुटिनले विश्व खेलकुदमा डोपिङको कुनै स्थान नहुने भन्दै आफ्नो देशमा भएको व्यवस्थित डोपिङ प्रकरणले रूसकै बदनाम भएको पनि स्वीकार गरेका छन् । सिंगो रूस नै रियो ओलम्पिकमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने डरले पनि उनको यो भनाइ आएको हो ।
रूसले निम्त्याएको यो गम्भीर विवाद कसरी सुरु भयो त ?
यसका लागि सन् २०१४ मा फर्कनुपर्छ, जति बेला एक जर्मन डकुमेन्ट्रीले अनुसन्धात्मक समाचार प्रसारित गरेको थियो र त्यसमा दाबी गरिएको थियो, रूसका ९९ प्रतिशत खेलाडीले डोपिङ गर्छन् । त्यसपछि डोपिङको छानविन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वाडाले आफ्नो काम थालनी गरेको थियो । त्यस क्रममा छानबिन कमिटीको ठहर थियो— हो, रूसले व्यवस्थित ढंगले आफ्ना खेलाडीलाई डोपिङ गर्छ ।
यो काममा रूसी खेल मन्त्रालय मात्र होइन, जासुसी संस्था केजीबीसमेत संलग्न थियो । उनीहरू ओलम्पिक र अरू ठूला प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीलाई प्रायोजित रूपमा डोपिङ गराउँथे । ती ठूला प्रतियोगिताअघि उनीहरूको डोपिङरहित नमुना संकलन गर्थे । प्रतियोगिताका क्रममा लिइएको डोपिङ युक्त नमुना ती सफा नमुनासँग साट्ने काम हुन्थ्यो । यसरी खेलाडीहरू डोपिङमा समातिएनन् । नसमातिएका अधिकांश खेलाडी पदक विजेता नै थिए ।
प्रकाशित :श्रावण १९, २०७३
मिस इटालीमा मोटी विवाद
ओलम्पिकमा रूसले निम्त्याएको विवाद
फुटबल विवाद सुल्झिने सँघारमा
आफैंले निम्त्याएको कारबाही
नेपालले कति पदक जित्नेछ ? कार्तिक ३०, २०७६
हिमाल चुम्न ‘याक अट्याक’ कार्तिक २९, २०७६
रंगशालामा फर्कंदै फुटबल कार्तिक २७, २०७६
भाग्यमानी सान्टु कार्तिक २६, २०७६
रिजेक्ट भएका ज्ञानेन्द्र कार्तिक २५, २०७६
अलिकति विश्वास अलिकति शंका कार्तिक २४, २०७६
पारसको जन्मदिन र जर्सी नम्बर कार्तिक २३, २०७६
सन्दिपले किने काठमाडौँमा बंगला, मुल्य कति ? कार्तिक २०, २०७६
फिटनेस सेन्टरमा आकर्षण कार्तिक १९, २०७६
प्रथम एसिया कप खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराँते प्रतियोगिता हुने कार्तिक १८, २०७६